मिडियालाइट वारेन्टी - मिडियालाइट बायस प्रकाश
MediaLight प्रत्येक घटक को लागी एक व्यापक5बर्षे वारंटी सामेल छ। हामी घाटा र चोरी लाई कभर गर्दछौं।
मिडियालाइटसँग अन्य एलईडी बत्तीहरूको तुलनामा उच्च अग्रिम लागत छ किनकि हामी अझ राम्रा, बढी सटीक एलईडी र अधिक मजबूत कम्पोनेन्टहरू प्रयोग गर्दछौं। हामी प्रणालीलाई सुधार गर्न सजिलो बनाउनको लागि मोड्युलर दृष्टिकोणको साथ सबै चीजहरू डिजाइन गर्छौं यदि केहि गलत भयो भने। सस्तो प्रणालीहरूको साथ, तपाईंले प्राय: सम्पूर्ण प्रणालीलाई बदल्नु पर्छ जब एक कम्पोनेन्ट विच्छेदन हुन्छ। यसको मतलब यो छ कि समयको साथ, हाम्रो उत्पादनले मात्र राम्रो प्रदर्शन गर्दैन - यसको कम लागत!
यदि तपाईंको मिडियालाइटमा केहि भयो भने, हामी या त कारण पहिचान गर्नेछौं र आवश्यक प्रतिस्थापन भाग पठाउनेछौं वा यसलाई नि: शुल्क प्रतिस्थापन गर्नेछौं।
कभर गरिएको वारेन्टी दावीहरूका उदाहरणहरू:
"कुकुरले मेरो रिमोट कन्ट्रोल चबाए"
"मैले गल्तिले लाइट स्ट्रिपको पावर एन्ड काटें।"
"बेसमेंटमा बाढी आयो र यसैले मेरो टिभीलाई लग्यो।"
"बत्तीहरूले काम गर्न छाडे र मलाई किन थाहा छैन।"
"मेरो स्टुडियो लुटिएको थियो" (यदि पुलिस रिपोर्ट प्रदान गरियो भने कभर गरिएको)।
"मैले मेरो स्थापना बोके।"
कभर गरिएको छैन:
एक MediaLight प्रतिनिधि समस्या निवारण मद्दत गर्न अस्वीकार सामान्य रूपमा सामना गर्नुपर्ने मुद्दाहरूको सूचीबाट एक समस्याको कारण।
यस अवस्थामा, हामी वारेन्टी अवधि भित्र जानकारी प्रदान नभएसम्म प्रतिस्थापन भागहरू पठाउन सक्दैनौं।
जानबूझकर विनाश वा निपटान
घरेलु शिपिंग खरीदको मिति देखि २ बर्ष पछि। दुई बर्ष पछि, हामी कुनै पनि बिग्रिएको वा हराएको अंशहरू खरीदको मिति देखि years बर्ष सम्म बदल्नेछौं, तर हुलाकी लागतको लागि मात्र एक इनभ्वाइस पठाउँनेछ (वा तपाइँ एक यूपीएस वा फेडरक्स खाता प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ)।
सबै अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी तपाईंको उत्पादन प्राप्त भएको 65 दिन पछि सुरु हुन्छ। हराएको प्याकेजहरू बाहेक (हाम्रो हेर्नुहोस् ढुवानी पृष्ठ जब एक प्याकेज हराएको मानिन्छ) वा दोषपूर्ण एकाइहरू जान्न, हामी 65 दिन पछि अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी कभर गर्दैनौं। हामी कुनै शुल्क बिना आवश्यक भागहरू प्रतिस्थापन गर्नेछौं, तर भागहरू पठाउनु अघि ढुवानी इनभ्वाइस गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्छौं। तपाईको क्षेत्रमा डिलरबाट मिडियालाइट किन्नु लगभग राम्रो हुन्छ जसले प्रतिस्थापन भागको शिपिंग कभर गर्दछ।
जब तपाइँ तपाइँको मिडियालाइट स्थापना गर्नुहुन्छ त्यसबेलादेखि हामी मद्दतको लागि त्यहाँ रहनेछौं। यदि हाम्रो उत्पादनहरूमा केहि गलत भयो भने चिन्ता नलिनुहोस्! हामी तपाईंलाई सम्झाउन चाहन्छौं कि कुन कुराले हामीलाई पहिलो अन्य प्रकाश कम्पनीहरूबाट अलग राख्यो: गुणस्तरको अवयवहरू जुन वर्षौंसम्म रहन्छ।
हामीले महसुस गर्‍यौं कि बजारमा एक दूरीको प्वाल रहेको छ जब यो सटीकता, गुणस्तर र सेवाको हो। हामी हाम्रो आपूर्तिकर्ताओंलाई उही एक्सेकेटि standards मापदण्डहरू समात्यौं। जब हामी भाग बदल्छौं, हाम्रो आपूर्तिकर्ताहरूले हामीलाई फिर्ता दिन्छन् - यसले हाम्रा सबै उत्पादनहरू अझ राम्रो बनाउँदछ र सबैलाई जवाफदेही राख्छ।
मिडियालाइटले टिनमा जे भन्छ यसले गर्दछ। हामीले तपाईंको स्थापनाको लागि तपाईंलाई आवश्यक सबै चीजहरू समावेश गरेका छौं, त्यसैले आज मिडियालाइटको साथ सुरू गर्नको लागि त्यहाँ कुनै थप उपकरणहरू आवश्यक पर्दैन वा हार्डवेयर स्टोरहरूमा ट्रिप्स हुनेछैन!